17 Israel asafo nyinaa tu fii Sin+ sare no so. Sɛ wofi beae biako a na wɔkɔ beae foforo sɛnea Yehowa hyɛɛ wɔn no,+ na akyiri yi wɔkɔsoɛɛ Refidim.+ Nanso na nsu nni hɔ a ɔman no bɛnom. 2 Na ɔman no ne Mose hamee, na wɔkae sɛ:+ “Ma yɛn nsu nnom.” Na Mose ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Adɛn nti na mo ne me ham? Adɛn nti na mokɔ so sɔ Yehowa hwɛ?”+ 3 Afei na sukɔm de nkurɔfo no wɔ hɔ, enti ɔman no nwiinwii hyɛɛ Mose sɛ: “Adɛn nti na woayi yɛn afi Egypt aba ha sɛ osukɔm mmekunkum yɛne yɛn mma ne yɛn mmoa?”+ 4 Ɛnna Mose su frɛɛ Yehowa sɛ: “Dɛn na menyɛ ɔman yi? Aka kakraa bi na wɔasiw me abo!”+ 5 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Fa poma a wode kyerɛɛ Asubɔnten Nil+ so no kura, na fa Israel mpanyimfo no bi ka wo ho fa nkurɔfo no anim kɔ.+ 6 Hwɛ, migyina w’anim wɔ Horeb botan so. Fa wo poma no bɔ ɔbotan no mu na nsu befi mu aba ma ɔman no anom.”+ Enti Mose yɛɛ saa wɔ Israel mpanyimfo no anim. 7 Na ɔfrɛɛ hɔ Masa+ ne Meriba,+ efisɛ ɛhɔ na Israelfo no ne Mose hamee, na wɔsɔɔ Yehowa hwɛe+ bisae sɛ: “Yehowa wɔ yɛn mu anaa onni yɛn mu?”+ 8 Afei Amalekfo+ bae sɛ wɔne Israel rebɛko wɔ Refidim.+ 9 Ɛnna Mose ka kyerɛɛ Yosua+ sɛ: “Paw mmarima+ ma wɔne Amalekfo nkɔko. Ɔkyena mede nokware Nyankopɔn no poma+ bekura akogyina koko no so.” 10 Yosua yɛe sɛnea Mose ka kyerɛɛ no no,+ na ɔkɔe sɛ ɔne Amalekfo no rekɔko, na Mose ne Aaron ne Hur+ nso foro kogyinaa koko no so. 11 Nea ɛbae ne sɛ, sɛ Mose ma ne nsa so kɔ soro a, na Israelfo no redi nkonim,+ na sɛ ogyaa ne nsa mu ba fam a, na Amalekfo no redi nkonim. 12 Bere a Mose nsa gyenee no, Aaron ne Hur faa ɔbo de no tenaa so, na wosusoo ne nsa mu, obiako wɔ benkum na obiako wɔ nifa, na ne nsa mu angow kosi sɛ owia kɔtɔe. 13 Enti Yosua de nkrante dii Amalek ne ne dɔm so.+ 14 Afei Yehowa ka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kyerɛw eyi wɔ nhoma no mu na ɛnyɛ nkae,+ na ma ennu Yosua asom sɛ, ‘Mɛpopa Amalekfo ma wɔrenkae wɔn bio wɔ ɔsoro ase.’”+ 15 Mose sii afɔremuka na ɔtoo din Yehowa-Nisi, 16 na ɔkae sɛ: “Esiane sɛ wɔama wɔn nsa so atia Yah+ ahengua+ nti, Yehowa ne Amalek bɛko fi awo ntoatoaso so akosi awo ntoatoaso so.”+